Hirgalinta Qorshaha Isgaarsiinta dalka iyo doorka Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Hirgalinta Qorshaha Isgaarsiinta dalka iyo doorka Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta
Hirgalinta Qorshaha Isgaarsiinta dalka iyo doorka Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta
Dalku waxuu soo maray marxalado badan iyo duruufo adag. Waxaa illaahay mahaddiis ah in maanta aan mareyno meel wanaagsan oo leh ifafaalo iyo rajo muuqata, una baahan taxaddar iyo joogteyn.
Isgaarsiinta dalka iyo Teknooliyaddu waxa ay kamid yihiin adeegyada sida gaarka loo maamulay loogana faa’iiday oo ay ganacstada Soomaaliyeed ka hawlgaleen muddadii uu dalku burbrusanaa. Milkiilyaasha iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee dhanka Isgaarsiintu waxa ay dalka kasoo saareen marxalado kala duwan, iyaga oo ku ammaanan in ay dalka soo gaarsiiyeen meel wanaagsan oo la jaanqaadi karta caalamka intiisa kale. Haddaba waxaa la isweydiin karaa waa maxay doorka dowladda Soomaaliyeed uga aaddan qorshaha Isgaarsiinta dalka ee ay gacanta ku hayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay?
Marka hore waxaa wanaagsan in la fahmo in shirkadaha bixiya adeegga Isgaarsiintu aysan ahayn kuwa kaliya ee gaarka loo leeyahay ee dalka ka hawlagala, umaddana shaqo badan usoo qabtay. Isgaarsiintu waa qayb muhiim oo uu ka muuqdo horumar ballaaran oo casri ah. Marka hore waxaa waajib ah in milkiilayaasha iyo ganacsatada Soomaaliyeed lagu bogaadiyo hawshaas ay soo qabteen. Haddii laga faa’iideyna waa wanaag iyo dhaqaale galay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Dawladdu waxa ay u adeegtaa shacabka Soomaaliyeed waxa ayna dhiirrigelisaa kobaca dhaqaalaha suuqa xorta ah. Sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo inuusan marnaba jirin dareen ka dhan ah ganacstada Soomaaliyeed oo haatan bixiya adeegyo muhiim u ah dalka iyo dadka. Waxaa wax lagu faano ah in maanta dalka Soomaaliya tuulo walba laga helo Isgaarsiin casri ah, telefoon gacan iyo adeegyada kale oo Isgaarsiineed. Waa shaqo ay dowladdu qaban lahayd balse loo qabtey waxaana ka faa’iideysta shacabka Soomaaliyeed.
Haddaba waa maxay doorka ay dowladdu ku leedahay shirkadaha Isgaarsiinta? Doorka ugu muhiimsan ee ay dowladdu ka ciyaari karto waa in uu ahaado mid ku saleysan kobcinta iyo kor u qaadista ganacsiga iyo adeegga Isgaarsiinta. Doorkaasi waxuu noqonayaa in la helo sharci haga Isgaarsiinta dalka oo hadda horyaalla golaha Baarlamaanka. Xeerka Isgaarsiintu waxa uu hubinayaa islamarkaasna sugayaa saddex arimood; 1. Danta shirkadaha, 2.Danta adeeg-helayaasha ( Macaamiisha) iyo 3. Midda dawladda. Ujeedada laga leeyahay in la helo xeerkan waxa weeye in adeegga Isgaarsiintu fido, yeesho tayo wanaagsan, lagana faa’iido.
Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiintu waxa ay xukuumadda mas’uul uga tahay arrimaha Isgaarsiinta oo dhan waxeyna waddaa qorshe ballaaran oo dalka oo dhan loo dajinayo kaas oo qeyb ka qaadanayaan dhamaan dadka ay khuseyso ama ka ganacsada adeegyada Isgaarsiinta noocyadooda kala duwan, si loo helo qorshe dhameystiran oo dalka oo dhan laga hirgeliyo. Dalku kama maarmo in la helo shuruuc iyo xeerar lagu kala baxo laguna xisaabtamo.
Dajinta Qorshaha iyo Hirarka dalka
Wasaaraddu waxa ay muddo dhaw soo bandhigi doontaa qorshaha shaxda hirarka qaranka (National Frequency Table) taasoo ah mid laga heli karo dhamaan hirarka dalka iyo cidda isticmaasha ama ku shaqeysata. Arintani waa mid caam ah waxa ayna kamid tahay shuruudaha hay’adda Isgaarsiinta caalamku (International Telecommunication Union- ITU) ay dal walba ka rabto iney soo bandhigaan, ayna noqoto mid caam ah oo laga helo bogga Wasaaradda. Hirarka dalka (Frequency) waa hanti dalku leeyahay, waxa ayna kamid tahay kheyraadka dabiiciga ah ee illaahay inagu maneystey. Waxaa laga maarmaan ah in loo isticmaalo si beekhaansan oo aysan dhicin in la is dul dago sida hadda dhacda.
Dib kala soco qormooyinka dambe
Axmed Xaaji Cabdi
Previous articleTiro-koob Qiyaas ah oo Soomaaliya Laga Sameeyay Sanad Kahor Ayaa Maanta La Faafiyay
Next articleDa’yarta Soomaaliyeed yaa u qoray Darxumada?